Haweenka jaamiciyiinta ah oo ey shaqooyinka dhibi ka heysato - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Haweenka jaamiciyiinta ah oo ey shaqooyinka dhibi ka heysato
Haweenka jaamiciyiinta ah oo ey goobaha shaqooyinka dhibi ka heysato.
La daabacay fredag 27 oktober 2017 kl 09.45
Dadka dalkaan aqoonta heerka jaamici leh ayaa duruufaha iyo jawiga ey ku shaqeeyaan sii xumaadey, dumarka kuwooda caruurta leh iyo kuwaan laheynba ayaa dhankaas ka sii daraya marka ragga la barbardhigo.
Sidaasna waxaa lagu muujiyey baaritaan ey soo saartey ururka shaqaalaha dadka aqoonta heerka jaamici leh oo lagu magacaabo Jusek.
Daniel Lind oo ka hawlgala ururka Jusek ayaa wuxuu yiri sidan:
- Haweenka culeys iyo walwal xoog leh ayaa ka heysta goobaha shaqada kuwaas oo qabta qiyaastii laba jibbaar shaqadii laga rabey, waxayna isku dhexwadaan dhammaan caruurta, qoyska iyo shaqada intaba. Dumarka aan caruuraha laheyn ayaa xataa ka walwal iyo walbahaar badan ragga caruuraha leh, ayuu yiri Daniel Lind.
Daniel Lind ayaa qaba inkastoo ragga iyo dumarku ey labaduba qabtaan shaqooyin kala duwan hadana dumarku guud ahaan waxay dareemayaan in culeysyo dheeraad ah oo adadag lagu xiro in ka badan tan ragga lagu xiro markii ey boos shaqoo isku mid ah u tartamayaan.
Ragga aan caruurta laheyn ayaa ah kuwa goobaha shaqada dhibta ugu yari ka heysato, waxaa kaloo muuqata in markii ragga da’doodu sii weynaataba ay dhib yari dhanka shaqada ka dareemayaan meesha dumarka eysan taasi wax isbadal iyo raad ah ku laheyn.
Daniel Lind ayaa ku taliyey si loo yareeyo dhibaatooyinkaas walwal ee heysta haweenka aqoonta sare leh loo baahan yahay in dawladdu ey u hawlgasho qorshe cad oo fulineed , isla markaasna shaqa bixiyayaasha culeys ku saarto wax ka qabashada arrinkaas.